Somalida waa dad is jecel
Saturday January 02, 2010 - 10:05:58 in Recent Stories by Super Admin
Kuma Fakirin inaan intaan qaban karno.
Markii aan bilowney barnaamijkaan waxaan ku bilowney Muraayo Nur Ali, kadibna waxaan ku xigay Binti Jaylaani.
Kuma fikrin inaan arintaan ay noqon karto wax intaas gaarayo, balse ilaahay mahadii waxaa suurto gal noqotey inaan daawayeyney ugu yaraan 60 qofood oo iskugu jira caruur iyo dad waawayenba.
Marnaba kuma fikirin inaan intaan aan qaban karno basle arintaan waxay ahayd mid ilaahay watey oo nagu shaqaysanayey oo aan wax u qabanayney walaalaheen dhibaataysan.
Cid alle cidii ku tiraahdo Somali isma jecla u sheeg inay tahay mid waxba ka jirin
Marka walaalalyaal waxaan kuu sheegaa shaqada aaan qabanay waxaan ku qabaney kaliya waa dhaqaalaha aan ka aruurino walaalayaasha Soomaliyeed,
Marna ma helin deeq kale oo ajnabi na siiyaan. Waa uun dhaqaalaha aan ka helno walaalaha Soomaliyeed oo dollar dollarka iyo 5, 10 20 aan ka helno dadka Soomaliyeed. Howshaan qabaney marnaba ma filaayo inaad ku tusin karno maxaa yeelay waxaan daawayney caruur yar yar oo meel ay ka saxaroodaan aan lahayn oo lahay meel ay kaadshaan. Waxaan qabaney oo daawyaney dumar si xun looga dhaliyey markii ay foosha qabtey oo kaadida iyo saxaradda ay ka socoto. Intaas ma qabteen hadii aysan reerkayga iyo familkayga ay igu taageeri lahayn iyo dhamaan asxaabtayda oo dhan. Marna ma iloobi karo shaqsiyaadka qaarkood oo igu dhiiri galiyey inaan wadno howshaan oo har iyo habeen telphoonka iyo ducada noo soo diraya.
Waxana ka soo qaadney caruurto gobalada Somaliya oo dhan .
Hargaysa, Garoowe,Boosaaso, dhuusamareeb,caadado, burtinle,laascaanood, Baladwayne, cabuudwaaq, Jowhar,Mogadihsu, Ceelasha biyaha, Afgooye, Owdheegle, Baydhabo.Teyeegloow, jamaame, Kismaayo. iyo Gobolo kale.
Intaas waxaa noo dheer inaan rabno inan gayno daawooyin gobalada dalka oo leh cisbitaalada waaweyn.
Inshalaah waxaan umadda Soomaliyeed tusiney in ay tahay in Somalidu is caawin karto oo isku caawin karto Walaal tanimo iyo Soomalino.
Markaan Arko Muraayo ama Binti, Ama Mohamed ila jooga magaalada aan degan nahay ee Minnesota ama aan ku soo booqdo Kenya ama meelo kaleba ayaan waxaan ku iloobaa wax yaabo badan oo aan naftayda ka maqan... oo markasta ku fikiro... Marnaba suurto gal ma iima noqoteen hadii aaney asxaabatayda ayna ugu taageeri lahayn wanaagan.
Marna ma filaayo inuu jiro ruux kaamil ah oo wax kasta ku wanaagsan, Waa jiri karto amaba dhici kartaa wax yaabo qaldan inaad aragtid balse aan isku dayno inaad isla saxno oo qaladaadkaas yar hadii u jiro in laysku dambi dhaafo.. lana saxo waxii qalaadaad ah Inshalaah Waxaan ilaah ka barayaa kuwii wanaaga ku walaalooba xumaantana kataga.
Hadii aad rabtid inaan kuu soo dirno cajalado ka hadlaayo wax qabadkeena fadlan ii soo sheeg addreskaada aniga ayaa kuu soo diri doona
Fadlan nagala soo xariir. Somcare@somcare.org.